Siri sidoo kale wuxuu ku biirayaa Pokémon Go fever oo leh jawaabaheeda | Wararka IPhone
Qandho xumida 'Pokémon fever' kama maqnaan karin kaaliyaha ugu caansan dalladaha Apple. Siri ma rabin in laga tago marka ay timaado moodada. Xaqiiqdii, maahan markii ugu horreysay, waxaan horeyba uga helnay jawaabo xiiso leh oo ku saabsan Ciyaarta carshiga waxay kuxirantahay munaasabadaha, ama waxyaabaha caadiga ah ee ay soosaaraan waxyaabaha muhiimka ah ee Apple. Markan, Siri waxay qabsatay Pokémon Go, jawaabo taxane ah oo qosol leh ayaa lagu daray liistada jawaabaha markaan weydiinno su'aal ku saabsan Pokémon Go. Tani waa sida Siri u falceliso markaan kala hadlayno Pokémon Go.
Hal su'aal, waxaan ahaa mid sax ah oo kooban, maadaama ay ka jawaabeyso oo kaliya hal su’aal, taas oo ah kuwan soo socda:
Siri, ma jeceshahay Pokémon Go?
Iyo wax kale, ha ku sii adkeynin, ha weydiisan wax aad u adag, waxay kaliya uga jawaabi doontaa si sax ah oo qurux badan oo ku saabsan Pokémon Go marka su'aashu ay tahay tan. Intaas waxaa sii dheer, fiidiyowga waxaad ku arki doontaa jawaabo yar oo dheeri ah. Kuwa kale oo badan waxaan ka helnay waxyaabaha soo socda:
Ma aragtay waxa ku dhacay kaaliyaha dalxiis ee ugu dambeeyay ee xaqiiqada la kordhiyay?
Waxaan jeclahay inaan ku ciyaaro Pickachu darbi jiqda.
Wow, waa taas sababta qof kastaa u weydiiyo midabkiisu waa Geodude?
Waxaan ugaarsanayay Mew iyo Mewtwo!
Waxaan ka jawaabayay su'aalaha ku saabsan isbeddelada Bulbasur muddo dheer.
Waxaan u maleynayaa inaad tahay inaad ugaarsato dhammaantood
Iyadu keligeed ma aha qabashada
Kaaliyaha kumbuyuutarka ee Microsoft (Cortana) iyo Google ee (Google Now) sidoo kale waxay ka jawaabaan su'aalaha ku saabsan Pokémon Go, si kastaba ha noqotee, marka laga hadlayo Google Now waxay na siin doontaa oo keliya natiijooyinka raadintaWaa maxay dareenka yar ee kaftanka ah ee ay leeyihiin Google. Dhinaca kale, Cortana waxay qaadeysaa tusaalaha saaxiibkeed Google Now waxayna fureysaa daaqad biraawsar, iyada oo aan wax intaa ka badan lahayn.
Haddii Siri ay ku siisay jawaab ka duwan, ha ka waaban inaad noo sheegto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Siri sidoo kale wuxuu ku biirayaa Pokémon Go fever iyo jawaabihiisa
Xishood Siri inaad wax ka ogaato Pokemon oo aadan ka ogayn qosolka Olombikada 2016
Ku jawaab mboccaccio
Gabi ahaanba waa la isku raacay, waxaan u laabaneynaa sida carsaanyo oo kale. Ha noolaado ojeda, dhammaan kuwa ku ciyaaraya pokemon waa ..
Si aan ugu fidinno boqortooyadeenna waddada weyn ee Picacho-Ajusco!
Waxaan weydiiyay Siri "Ma ciyaareysaa Pokemon Go" waxayna iigu jawaabtay "Fiiri, Jigglypuff ayaa ku daba jooga! Maya, sug waa Wigglytuff. Marwalba waan wareeriyaa magacyadooda.
Jawaab Mercedes Balda